Haben Madow Oo Puntlnad U galay ! ..Iyo Ciidamada Somaliland OO Garowe Ku Siqay | Xaqiiqonews
Haben Madow Oo Puntlnad U galay ! ..Iyo Ciidamada Somaliland OO Garowe Ku Siqay
War cawaa soo gaaray Shabakadda xaqiiqonews ayaa sheegaya in deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool xaaladdiisu ay tahay mid kacsan,islamarkaana suurta gal ay tahay in saacad walba uu dagaal dhaco maadama Labadan Ciidan wali is hor fadhiyaan.
Dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay iney cabsi xooggan ay dareemayaan,taasi oo ku aadan in mar kale lagu kor dagaalamo.
Maamulada Puntland iyo Somaliland oo dirirta dhexmartay ayaa warbaahinta hadalo kulul isku mariyay,taasi oo saacad kasta xiisada ka sii dari karto.
Feysal Cali Waraabe oo ka mid ah Siyaasiyiinta Somaliland ayaa sheegay ineysan waxba ku qaadaneyn qabsashada magaalada Garowe dagaalkana uu ku lug leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo hadda ku sugan Garowe.
Si kastaba ha ahaatee wamaa markii ugu horeysay ee ciidanka Somaliland ay Horumar balaaran ka sameeyaan jiida hore ee dagaalka waxeyna arintani ku soo aadeeysaa xilli Madaxweyne Farmaajo uu safar ku maraayo deeganada Puntland.